Ikhaya labakhubazekile lamukela umnikelo | News24
Ikhaya labakhubazekile lamukela umnikelo
Isithombe: Sithunyelwe UMeya waKwaDukuza uRicardo Mthembu kwesokudla kanye nabamele uHesto, Unitrade, Food for Life noMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi emcimbini wokunikela kwezimpahla kwi khaya labantwana abakhubazekile ngeledlule.
INHLANGANO ezimele enakekela abantwana abakhubazekile, Inqolobane Institute for African Heritage yamukele umnikelo ovela kosomabhizinisi kanye nehhovisi lika meya waKwaDukuza ngeledlule.
Abakwa Hesto bebambisane nabakwa Unitrade, Food for Life kanye noMeya uMnuz Ricardo Mthembu banikele ngezitofu ezimbili, iziqandisi ezimbili, izingubo zokulala kanye nokudla.
UMeya uMthembu uthe kuyamujabulisa indlela ihhovisi lakhe lisebenzisane nosomabhizinisi ukulekelela leli khaya.
Uthe: “Ngithanda ukudlulisa ukubonga kulabo abafikelwa umbono wokuvula leli khaya.
Ngithanda nokubonga abakwa Food for Life, Hesto kanye nabakwa Unitrade ngalo mnikelo,” kusho uMeya.
Oyilunga lebhodi yalenhlangano uNksz Zama Ndlovu uthe basungula ikhaya lokunakekela abantwana abakhubazekile Inqolobane Centre for the Disabled, ngonyaka odlule, ngoba bebona isidingo sokulekelela abazali balezizingane.
Uthe: “Leli khaya linakekela abantwana abangama-14 okwa manje.
Lababantwana baqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene njengoba abanye abase Manguzi, eNquthu kanti abanye abasEmpangeni,” kusho uNksz Ndlovu.
Uqhube wathi bangama-18 abasebenzela leli khaya abaholelwa imadlana engatheni nguhulumeni njengoba Inqolobane ithembele kwimnikelo.
Abasebenzela leli khaya baqeqeshwa uMnyango wezeMpilo ngokunakekela abantwana abakhubazekile, ngokusho kuka uNksz Ndlovu.
UNksz Ndlovu uthe: “Iningi labo yintsha esebenza ngokuzikhandla futhi ikhombisa ukuwuthanda umsebenzi wayo,” kusho yena.
Uqhube wathi Inkosi uZwelibanzi Dube yanikela ngomhlaba nangendlu ukuze inhlangano yabo izokwazi ukugcina abantwana khona.
Ekhuluma emcimbini wokwethulwa komnikelo ngeledlule, uMeya uMnuz Mthembu uthe: “Njengo mkhandlu siyayibonga Inkosi uDube ngalokhu ekwenzile,” kusho yena.
IKhansela lakwa Ward 3, eNew Guilderland, uMnuz Gabangani Van Whye ubonge umphakathi, Inqolobane, Inkosi uDube, uMasipala, uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi, kanye nosomabhizinisi ngendima abayidlalile ekulekeleleni leli khaya.
USihlalo wale nhlangano uMnuz Kenneth Mthunzi uthe abantwana bakuleli khaya bathokozile njengoba lo mnikelo ufike enyangeni yabasha kanti isikhathi esiningi abanakwa lababatwana ngenxa yesimo sabo.
Uthe: “Usuku lwanamuhlanje lubalulekile kulabantwana ngoba bazozizwa beyingxenye yomphakathi kanti futhi bazoba nesiqiniseko sokuthi amalungelo abo ayahlonishwa,” kusho uMnuz Mthunzi.
Uqhube wathi kusekuningi okusamele kwenziwe kuleli khaya ukuze abantwana bezohlala kamnandi.
USihlalo uthe: “Sisabhekene nenkinga yamanzi nogesi kuleli khaya kodwa ngiyethemba ukuthi izinto ezizolunga ngokushesha,” kusho uMnuz Mthunzi. Uqhube wathi banesifiso sokwakha ingadi lapho khona abantwana bezokwazi ukuzilula amathambo bephinde bedlale ngokukhululeka.
Uthe esinye sesifiso ukuvula ikhaya elizosiza abanenkinga yezidakamizwa.
Uma kukhona onesifiso sokuxhasa leli khaya engaxhumana noNksz Zama Ndlovu enombolweni ethi: 073 4840 441 noma noMnuz Kennethe Mthunzi enombolweni ethi: 071 8824 555